Iimoto zombane -Ikaro
yokuqalisa >> Motors >> Iimoto zombane
Isixhobo esijikelezayo esiguqula amandla kagesi en amandla oomatshini.
Apha siza kubona ukuba basebenza njani kwaye bazakha njani, ukusuka kwiinjini ezilula ukuya kwezintsonkothileyo
Umsebenzi wethiyori yeemoto zombane kunye neejenereyitha
Emva kwenqaku lokugqibela kulwakhiwo lwenqanaba elinye lokutshintsha kwemoto yangoku, ndiyifumene inika umdla kakhulu ukuxhoma ... Qhubeka nokufunda
Yakha imoto ye-AC
Ndifumene iwebhusayithi apho babonisa khona indlela yokwakha isigaba esinye esilula se-ac motor. Ndicinga ukuba kubalulekile ukugxininisa ukuba isebenza kuphela ngesigaba esinye.
Injini yenziwe ngezinto ezilula ukufumana kunye nokuphuhlisa imoto ukuqala e iziseko zethiyori zombane ze iimoto zombane.
Ndiyakhumbula xa ndiqala ekholejini funda oomatshini bombane, Baqala ukusifundisa a Imoto efanelekileyo yokujika enye. Ukusukela apha ukuya phambili, bayiphuhlisa ngakumbi nangakumbi de bafumana zonke iintlobo zeenjini, kodwa zihlala zisekwe kwimigaqo efanayo.
Ukwakhiwa kwemoto elula
Apha sibona indlela yokwakha ukulandelelana okulula kweemoto, kunye nebhetri kuphela, isiqwenga socingo kunye nomazibuthe. I… Qhubeka nokufunda